Ahoana ny fomba handefasana fampielezan-kevitra amin'ny mailaka sonia (ESM) mahomby | Martech Zone
Raha miasa amin'ny orinasa manana mpiasa mihoatra ny iray ianao dia misy ny fotoana ahafahan'ny orinasanao mampiasa sonia mailaka hitantanana sy handroahana ny fahatsiarovan-tena, ny fahazoana, ny famerenana amin'ny laoniny ary ny fitazonana azy ireo nefa ny fanaovana azy amin'ny fomba tsy mahasosotra. Ny mpiasanao dia manoratra sy mandefa mailaka tsy tambo isaina isan'andro isan'andro amin'ireo mpandray an-jatony, raha tsy an'arivony. Ny trano any amin'ny mailaka 1: 1 rehetra izay miala amin'ny mpizara mailaka anao dia fotoana tsy mampino izay zara raha araraotina.
Ny mailaka tsirairay izay andefasan'ny mpiasa dia manana fotoana mety hanaovana marika marimarina amin'ny sonia lehibe, ary koa manome antso an-tariby hanentanana ny fahatsiarovan-tena momba ny valisoa, vokatra, serivisy sns izay mety tsy fantatry ny mpanjifanao. Ny vahaolana dia ny fampifangaroana sy famolavolana paikady manodidina ny fametrahana sonia mailaka manerana ny orinasanao.
Inona ny atao hoe Marketing Signature Email (ESM)?
Marketing amin'ny sonia mailaka (ESM) dia fampiasa amin'ny fampiasana ny sonia mailakao amin'ny tanjona ara-barotra toy ny fampitomboana ny fahatsiarovan-tena amin'ny marika sy ny fanatsarana ny CTR amin'ny fandraharahana mailakao sy ny mailaka marketing.
Ahoana ny fomba hanatanterahana fampielezana marketing amin'ny sonia mailaka mahomby
Ilaina ny fampidirana birao
Ny sonia mailaka dia matetika fehezin'ny mpiasa eo an-toerana sy ireo sehatra fandraharahana mahazatra toa ny Google na Microsoft Office dia tsy manana fahaizana mitantana afovoany ny endrika imailaky ny tsirairay. Isaky ny misy banga toa an'io dia misy ny paikady manavao izay niditra an-tsena - mpitarika iray no Newoldstamp. Newoldstamp dia sehatra iray afovoany hitantanana ny sonian'ny mpiasa ary hanampy ny ekipanao hanatsara ny fifandraisan'ny mpanjifa sy ny mpanjifa.
Newoldstamp dia vahaolana mandeha ho azy tanteraka izay tsy mitaky hetsika ataon'ny mpiasa. Atosiho mivantana mankany amin'ny toeran'ny mpanjifany mailaka ny fanovana rehetra. Ampifanaraho ho azy ny angona avy amin'ny Active Directory na Google Workspace (G Suite taloha) Directory mba hamoronana sonia mifototra amin'ny modely iray.
Tombontsoa amin'ny marketing amin'ny sonia mailaka
Ny tombontsoa azo avy amin'ny marketing amin'ny sonia mailaka dia ny:
Ampandehano ny sonia mailaka tsy miovaova amin'ny mpiasan'ny orinasa iray manontolo izay manaraka ny torolàlanao.
Ampitomboy ny fivadihan'ny varotra sy ny varotra amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny mailaka ataonao sy ny fanaovana fampielezan-kevitra amin'ny sonia fanaovan-tsonia.
Tantano ny sonia mailaka rehetra avy amin'ny dashboard iray. Natsangana ny sonia mailaka haingana sy mora.
Ampifandraiso am-pilaminana ny sonianao amin'ireo mpanjifa mailaka lehibe sy fitaovana finday, Google Workspace (G Suite taloha), Exchange, Microsoft 365.
Tsy misy isalasalana ny fahombiazan'ny ESM. Ny fiverenan'ny fampiasam-bola amin'ny ESM dia goavana - Newoldstamp dia nahita hatramin'ny a 34,000% ny tambin'ny fampiasam-bola eo amin'ny sehatr'izy ireo. Ireo sehatra ireo dia azo ampiasaina hanaparitahana ny fifandraisana mifototra amin'ny andraikitry ny mpiasa sy hanaraka tsara ny valin'ireo fampielezan-kevitra ireo.
Ahoana ny fomba hanombohana fanentanana amin'ny marketing amin'ny sonia mailaka mahomby
Ny ekipa ao amin'ny Newoldstamp dia namolavola ity sary an-dàlana tsikelikely ity izay mandeha aminao amin'ny dingana 7 handefasana fanentanana sonia mailaka mahomby.
Mitadiava toerana hanaovana sonia mailaka ao amin'ny paikadin'ny varotrao
Asio fizarana ny mpihaino anao
Farito ny tanjon'ny fampielezana sonia mailaka
Mamolavola famolavolana sonia mailaka miaraka amin'ny marika ao an-tsaina
Alaharo ireo fampielezan-kevitrao
Araho ny fampielezana varotra sonia mailakao
Manatsara ny fanentanana arak'ity angona ity
Midira ho an'ny Newoldstamp
Fampahafantarana: Mampiasa rohy mpiara-miasa aho Google workspace.
Tags: tranonkala mavitrikactafanoratana mailakafitantanana sonia mailakamarketing amin'ny sonia mailakasehatra sonia mailakaesmExchangegoogle workspacemitombo ny fiovam-poSary torohayfifanakalozana microsoftMicrosoft Officenewoldstampbirao 365